Ikati le-orange tabby: umlingiswa, izici, intengo nokuningi! | Amakati kaNoti
El ikati le-orange tabby ungafisa ukuba ophuma kakhulu kunawo wonke amakati endlu. Ngenxa kaGarfield, ikati lekhathuni elithandwa kakhulu yithina esasiyizingane eminyakeni yama-90s, le yindoda enoboya ekwazi ukumamatheka ebusweni bethu nsuku zonke ngokusibuka nje.
Futhi into ukuthi ukubuka kwakhe kuthambile kakhulu, futhi leyo yinto ayithandayo kakhulu: uvamise ukuyisebenzisa ukuze athole lokho akufunayo, kusuka kuswidi kuya ku-caress. Into ehlekisayo ukuthi uhlala uthola okufunayo, ngoba ... Ubani ongaliziba ikati eliwolintshi le-tabby?
1 Umsuka nezici zekati le-tabby
2 Izakhi zofuzo zamakati we-tabby
3 Ukuziphatha kwamakati we-orange tabby
4 Intengo ye-orange tabby
5 Ungayikhetha kanjani ikhathalogi enhle yokuthenga ikati le-tabby?
Umsuka nezici zekati le-tabby
Iphethini yalezi zilwane ezinhle ingenye yezindala kakhulu; empeleni, uma siqhathanisa ikati lasendle (isib. Sizobona ukuthi banezici eziningi ezivamile.
Amakati we-orange tabby, awaziwa nangokuthi »i-orange tabby»Unoboya obuningi obuhlukahlukene: obomvu, owolintshi, noma ophuzi osagolide. Ngokusho kweCat Fanciers 'Association, izinhlobo ezingabazo zinganquma ngokuziphatha kwazo, ngoba izinhlobo ezithile zinezici ezifanayo zobuntu.
Noma kunjalo, kubalulekile ukusho ukuthi 'i-orange tabby' akuyona uhlobo oluthile, kepha kunalokho uhlobo lwephethini yombala eyenzeka ezinhlotsheni eziningi ze-feline. Ikati le-tabby lanoma imuphi umbala, kufaka phakathi owolintshi, linemivimbo ebusheni bayo, ulayini ebusweni bakhe naseduze kwamehlo akhe nohlobo oluthi “M” olumise uphawu esiphongweni. Imivimbo ivame ukuvela njengomthunzi noma emibili imnyama kune-orange enkulu yejazi.
Futhi ukuthi lezi zinsikazi zingezizinhlanga ezahlukahlukene, ngoba kukhona zombili ezinezinwele ezinde nezinwele ezimfishane.
Izakhi zofuzo zamakati we-tabby
Amakati weTabby angaba namaphethini wemibala ehlukene. IGen T (i-tabby) yiyo ephethe ukunquma ukuthi yimuphi umdwebo wesikhumba wesilwane ozoba nawo:
Ithebhu yegolide: umbala wombala wegolide noma owolintshi.
Ukulingisa noma ukumaka (Kuboshwe): imivimbo enemibala ebanzi, futhi akha ama-swirls.
Ithebhu yesiliva: isisekelo esinombala osiliva.
Ezimthende, ezimthende noma ezimabhele (Mackerel) Leli phethini linemivimbo noma amabhande emzimbeni wonke. Kuyinto evame kakhulu.
Inamabala noma ibala: amabala asatshalaliswa emzimbeni.
I-Tabby Tic (Ithikhiwe): ngombala okhoncekayo unwele ngalunye.
Ithebhu ewolintshi: njenge-protagonist yethu, isisekelo se-orange noma esimhlophe esinemivimbo emnyama emnyama, engaba khona emzimbeni wonke noma kwenye indawo.
Ukuziphatha kwamakati we-orange tabby
Ikati elinephethini yombala zidinga ukuhlangana kahle ngakho-ke bangaba ngabantu abadala abanoboya abafuna ukuchitha isikhathi nomndeni. Ngalokhu, kubalulekile ukuthi kusukela enyangeni nohhafu weminyaka abantu bakuthathe ngezandla zabo futhi bakunikeze uthando; Ngakho-ke, kancane kancane uzothola ukuzethemba kubo futhi, ngokuhamba kwezinsuku ezimbalwa, uzofuna ukudlala nabo. Lapho usunethezekile nabantu, ungahlukaniswa nomama wakho. Lokhu ngeke kwenziwe ngaphandle kokuthi ikati okungenani linamasonto ayisishiyagalombili ubudala., ngoba ezinyangeni ezimbili zokuqala zokuphila umama wabo kanye nezingane zakwabo bazofunda konke okuyisisekelo ukuba babe yikati: lawula amandla okuluma, ukudlala, ungaphambuki kude kakhulu nendawo ephephile, noma ugcine uhlanzekile.
Njengabo bonke ubomvu esibuletha ekhaya, i-tabby ewolintshi uzodinga ukunakekelwa kwezilwane: Sizokuthatha sikuhlole kanye ngonyaka, futhi sikunikeze yonke imigomo edingekayo. Futhi asikwazi ukukhohlwa ukumfaka inzalo, ikakhulukazi uma singahlosile ukumkhulisa noma uma ezoba nemvume yokuphumela ngaphandle. Ngale ndlela, ngokungadingi ukushisa, impilo yakho izothula futhi ihlale isikhathi eside, ngoba amathuba okuba nomdlavuza anciphile kakhulu.
Lokhu kungenelela okwenziwa odokotela bezilwane nsuku zonke, okungahlali ngaphezu kwesilinganiso semizuzu engama-30. Abesilisa bayalulama ngokushesha, empeleni, kungenzeka ukuthi ngalo lolo suku vele bafuna ukubuyela empilweni yabo ejwayelekile; abesifazane bathatha isikhashana: kusuka ezinsukwini ezimbili kuya kwezingu-2, kepha uma ucabanga ukuthi bazokwazi ukujabulela iminyaka yabo yokuphila kakhulu, kufanelekile. Futhi yilokho Lokhu kungenelela okuzoba nomthelela kumlingiswa wekati, kulwenze luhlale phansi, luthule futhi lube nobudlelwano.
Noma kunjalo, indlela ophathwa ngayo ekhaya izothatha isinqumo. Uma efundiswe ngenhlonipho, ngothando futhi, ngaphezu kwakho konke, ukubekezela okuningi, ngiyakuqinisekisa ukuthi le furry ayisoze yaba nenkinga yokuziphatha. Ngokuphambene nalokho, uma kunganakwa noma kungaphathwa kahle, khona-ke uzohlala nekati elizokwesaba wena nabo bonke abantu, ngakho-ke ngeke ngijabule.
Lokho kusho, thenga amathoyizi Yebo, leli kati liyakuthanda ukudlala. Ngalesi sizathu, uma unezingane, ngokushesha uzoba ngumngane wabo omusha onoboya 😉.
Intengo ye-orange tabby
Leli kati elihle futhi elinobungane ungayithola ezindaweni zokukhosela izilwane, njengakulezo ezivikelayo, lapho kuzodingeka ukhokhele izindleko zokutholwa kuphela. Le ntengo imvamisa izungeze ama-euro angama-80, afaka phakathi i-microchip, imigomo kanye nokubulala izikelemu.
Kulungile manje uma ufuna ukuzala kwekati ngezinwele ezi-orange, njengeManx noma iMaine Coon, kuzofanele ufune indlu yenja yezobuchwepheshe ezinikele ekukhuliseni lezi ezinoboya, futhi ezibanakekelayo. Okwekati bangakubuza kalula phakathi kwama-euro angama-300 kuye kwangama-500, kuya ngohlobo.
Ungayikhetha kanjani ikhathalogi enhle yokuthenga ikati le-tabby?
Izindlwana ezibucayi neziqeqeshiwe zinalezi zici:
Izikhungo lapho amakati ehlanzekile khona, ngaphandle kwephunga elibi noma amabala.
Izilwane zibukeka ziphilile futhi zijabule.
AmaKati achitha isikhathi esiningi ngendlela afuna ngayo nonina, ongeke ahlukaniswe naye aze abe nezinyanga ezi-2 noma ezi-3 ubudala.
Umphathi uphendula yonke imibuzo onayo.
Ngesikhathi sokulethwa, bazokunikeza nawo wonke amaphepha ahlobene nozalo lwesilwane.
Uma ubona okuthile okungakukholisi impela, jika ubheke enye indlu yenja.
Ikati eli-orange tabby liyisilwane esimangalisayo. Ingabe unoboya ekhaya?
Indlela ephelele ye-athikili: Amakati kaNoti » Izinhlobo » Ikati eli-orange tabby
una Cristina kusho
Nginekati elinjalo, lihle kakhulu, ziluhlobo oluhle impela 🙂
Phendula ku-wii ana cristina
Iqiniso lithi yebo 🙂
ubani igama lalowo mjaho
Amakati we-orange tabby awawona awohlobo oluthile olwaziwayo. Zingamahlosi amancane nje awolintshi 🙂.
Sawubona, nginekati elinezinyanga ezintathu ubudala enganikelwa ngalo ukuba ngilithathe kodwa intshebe yakhe inqunywe ohlangothini olulodwa. Ngabe bazophinde bakhule?
Cha, ngeshwa akunjalo
Uma zizokhula: 3 thula
UBarbara Diaz kusho
Ekhaya ngine-tabby esawolintshi enoboya. Unothando futhi unobungane kakhulu; kubo bonke abapha uthando. Futhi ihlala ikhona kuwo wonke umzuzu lapho yabelana ekhaya
Phendula u-Bárbara Díaz
UPaula Cruz kusho
Ngihlela ukwamukela ikati le-tabby kepha anginasiqiniseko sokuthi lidala kangakanani.
(ikati lilahlekile) futhi angazi kahle ukuthi ngingalifundisa kanjani, linolaka kakhulu futhi ngifuna ngempela ukulamukela
Phendula uPaula Cruz
Lelo kati kungenzeka lisabe, yingakho iziphatha ngaleyo ndlela.
Into yokuqala okufanele uyenze ukuthola ukwethemba kwabo. Mlethele amathini amakati bese umnika wona. Ungamthinti ekuqaleni, kepha ngokuhamba kwesikhathi uzokujwayela ukuba khona kwakho, futhi kulapho-ke ezokuza khona. Ngaleso sikhathi kulapho ungazama ukuyiphulula khona, uhlala wenza ukunyakaza okumnene.
Ngokubekezela, lelo kati lingaba ngumngane wakho omusha.
Ngithathe ikati eliwolintshi le-tabby futhi alifuni ukudla x + okuphakelayo okuphezulu kumikhiqizo. sicela uthumele amathiphu. ikati lineminyaka engu-1.1 / 2 ubudala futhi livela endaweni yokukhosela lapho lalikhona izinyanga ezintathu noma ezine. Ngamnika i-tuna, ukhilimu ushizi nekati lasebukhosini lokululama. yini enye engingakunika yona. Ngiyabonga
Iseluleko sami ukuthi uyinikeze okuphakelayo okungenakho okusanhlamvu, ummbila, ibhali, noma okuphuma kukho. Amakati awadingi futhi empeleni awakwazi ukukugaya kahle.
Enye indlela ukunikeza amaphiko enkukhu aphekiwe, isibindi, nenyama yezitho zomzimba.
Kuhle, Sara. Uqinisekile ukuthi ujabule kakhulu eceleni kwakho.
Nginekati elinjengaleli, iqiniso ngilicoshe emgwaqeni, futhi lihle kakhulu, ngiqonde ukuthi, senginalo inyanga yonke futhi liyakhala uma lingakotwa
Sawubona, ngine-katby kitten enamasonto amabili ubudala, ngingayigeza? Inamazeze amaningi, inobungane kakhulu futhi ngiyinika ubisi olungumgogodla lwamazinyane ezinyane asanda kuzalwa, iludinga kangakanani lolu hlobo lobisi ?
Usencane kakhulu 🙁. Kodwa-ke, ungafaka into exosha imvelo oyothola ezitolo zezilwane.
Ngokuphathelene nobisi, kufanele uliphuze okungenani amasonto ama-3 ngaphezulu.
Ngangine-tabby enoboya kodwa yafa, manje ekhaya nginezimbili, eyodwa inombala ofanayo. Umbuzo wami uthi ngabe lolu hlobo lwekati lingahlala lidla ukudla okulinganiselayo? , ngoba ikati lami langaphambilini libulawe ukutheleleka ngomgudu womchamo, linenkinga yezinso futhi alikwazanga ukumelana.Ngisize, ngiyesaba ukuthi kuzokwenzeka into efanayo nakule furry!
Ikati kumele libe nokudla okususelwa enyameni, njengoba kuyisilwane esidla inyama. Akucebisi ukubanika okusanhlamvu noma okunye, ngoba abakudingi futhi, ngaphezu kwalokho, kungakunika ukungezwani komzimba.
Sawubona, ngine-katby kitten ewolintshi, wonakele kakhulu futhi uthanda ukuheha. Kepha namhlanje, ngivumile kuye, ngizwe ibhola elincane phakathi kwesisu sakhe nezidladla zakhe. Kungaba yini? Ukuthola umbono ngenkathi ngingamyisa kudokotela wezilwane
Kulukhuni ukwazi. Kungaba yisifuba nje, kepha kungenzeka ukuthi igwinye into okungafanele ibe nayo, noma kungenzeka ukuthi ivuvuke ngenxa yokulunywa yizinambuzane.
Unebhulogi epholile ngempela !!! ngiyakuhalalisela, ngiyathanda ukuthi uhlale ubhala izinto ezithokozisayo, eziwusizo nezibhalwe kahle. Ngisanda kwamukela i-tabby orange kitten futhi ngimusha emhlabeni wamakati, ngakho-ke ibhulogi yakho ingifanele.
Ngiyabonga kakhulu ngamazwi akho 🙂
Ngiyajabula ukuthi kuwusizo kuwe.
Siyakuhalalisela ngoboya bakho! Fihla izintambo nezintambo, bayathanda ukudlala ngazo hehehe
Sawubona! Ukudalelwa wenze amazinyane amabili ewolintshi eze kimi ngoba umama wabo ushonile. Babenamasonto amathathu ubudala. Baphume ngomzamo omkhulu nothando. Manje banezinyanga ezimbili nengxenye ubudala futhi bayangihlanyisa! (Ngendlela enhle)
Ngabe uncoma ukuthi ngibasakaze nini? Ngikufunde lokho kusuka ezinyangeni eziyi-6? Uma bengingakwazi, bengizothumela isithombe ukuze ubone izimbungulu zami. Ngikufisela okuhle
Halala kulawo malungu amabili amasha omndeni 🙂
Ukuwathena yebo, okungenani kufanele ulinde aze abe nezinyanga eziyisithupha ubudala. Kukhona odokotela abakwenzayo ngaphambili, abane-5, kepha ngincoma ukuthi ulinde isikhashana, ukuze imizimba yabo ithuthuke ngokwengeziwe futhi isheshe ilulame.
Silande izinyane lekati eliwolintshi, inkinga ukuthi liluma kakhulu, kufanele libe nelilodwa phakathi kwababili kuwe
izinyanga ezintathu, ngithola kanjani ukuthi ingangilumi nezingane zami, uyayithinta udlale ngokuluma
Ukuze ikati lifunde ukungalumi, umdlalo kufanele ume ngokushesha lapho uluma futhi, ngaphezu kwakho konke, uhlale unethoyizi eliphakathi kwesilwane nomuntu. Kancane kancane u-feline uzofunda ukuthi yithoyizi okufanele alume.
Ikati lami eliwolintshi u-tabby uyinkosi yendlu i-XD… .. unezinyanga ezingaba ngu-9 ubudala ngamthabatha esemncane emgwaqeni… .. engenasisindo nezimbambo kufana nenjoloba .. ..namuhla ufana noGarfield… .Efundiswe njengomunye umuntu ... ulala phansi ngesisu ukuze isisu nemilenze yakhe kukhuhlwe… .akaconsi njengamakati ajwayelekile… .Ukhipha kuphela ithenda miiiii ……. Ubukhali kakhulu simthena kakhulu umncane… unoboya obuhle ...
Ngijabule kakhulu Taty 🙂. Lawa makati anomlingiswa okhetheke kakhulu.
Ikati lami lithembele kakhulu, lingilandela yonke indawo lapho lingivumela khona ukuthi ngidle, noma lenze noma yini futhi lilime ngaso sonke isikhathi, lizoba nezinyanga ezimbili engizenzayo, lahlengwa emgwaqweni
Kungenzeka angafuni ukuba yedwa ngoba ekhumbula umama wakhe nezingane zakwabo, futhi enkampanini yakho akazizwa eyedwa.
Iseluleko sami ukuthi ubeke embhedeni wakhe ingubo ethile oyisebenzisile (isibonelo isikhafu). Lokhu kuzokwenza uzizwe uzolile.
Uma ekhula, ungamnaki, uma kungenjalo uzofunda ukuthi ngamamesha uzokunaka, futhi lokho ngeke kube ngoba akakwazi ukuba naye amahora angama-24 ngosuku. Mnake ngalezo zikhathi lapho umbona ukuthi uzolile. Ekuqaleni kuzobiza, kepha njengoba izinsuku zihamba uzojwayela.
Ukumsiza, ungasebenzisa futhi umkhiqizo we-feliway noma we-tranquilizer othengiswa emitholampilo yezilwane noma ezitolo zezilwane. Fafaza amakamelo ochitha isikhathi esiningi kuwo, ungalokothi uye ngqo ekatini (ngaphandle uma umkhiqizo ukhombisa lokho, njengoba kukhona izifutho zemvelo ezingasetshenziswa ngqo esilwaneni).
Sawubona, ngisanda kwamukela namuhla ikati elinezinyanga ezi-2 ubudala, bengisemgwaqweni, silandelwa yizingane zami kanye ne-tabby yami ewolintshi, ngamyisa kudokotela wezilwane ngamfaka ukhololo ngamqophisa futhi uyayithanda, yena izizwa ikhululekile futhi ithobekile futhi inobungane futhi ihlanzekile kakhulu kusukela ekuqaleni kwenziwa esihlabathini sakho
!! Halala !! Jabulela inkampani yakho 🙂
Hhayi-ke, nginekati eliwolintshi le-tabby engalihlenga lapho lineminyaka emi-2 ubudala, omunye umuntu wesilisa omdala wayedla abafowabo, futhi waba nenhlanhla yokuthi ngangikhona, manje uyisilwane esihle kakhulu, akakaze abone elinye ikati futhi uziphatha kube sengathi singumphathi wakhe
Ubisi, inkinga nje ukuthi alikwazi ukuthintwa ngabantu ongabazi, kuphela yilabo esiphila nabo
Nginekati elinjalo futhi, elingathembi abantu esingabazi.
Ungahlala ucela labo bantu ukuthi bakunikeze okuphatha amakati, ukuze ubathembe.
Siyajabula ukuthi uyayithanda ibhulogi. Futhi ngiyabonga kakhulu ngokwabelana! 🙂
Nginekati elihle ekhaya, izikhathi eziningi unemidlalo emibi kakhulu, uyaluma futhi uyahayiza kodwa ubuso bakhe buyakhombisa ukuthi akukhona ngenxa yolaka abayimidlalo yakhe, uma kunezingane ekhaya uyahlanya, uyabasabisa kodwa kudlala nabo, abaningi Kwesinye isikhathi kunzima kimi ukunaka kepha akunalutho unyaka owodwa ubudala
Kubalulekile ukuthi ufunde ukungaklwebhi noma ukuluma. Kulezi zihloko sichaza ukuthi singakufundisa kanjani; lapha y lapha.
Nginekati elinezici lezi, igama lalo uMilo, unezinyanga eziyi-9, uyikati elithandekayo athande ukulidlala, alale amnike uthando.Udlalela usuku lonke nomngane wakhe omkhulu, inja encane endlini. ungumngane omuhle kakhulu. Akukho okubi engingakusho ngekati lami.
Impela ijabule kakhulu 🙂
Sawubona, ngithathe itabby enamabhele endaweni yokupaka izimoto eNyuvesi yami, benginovalo, bekunguLove at First Sight, bengilokhu nginezinja kodwa le Kitten, engiyiqambe ngokuthi uGarfield ngoba ifana nokuthi igangile, yebiwe Inhliziyo, bengingazi ukuthi bathanda kakhulu noma mhlawumbe lolu hlobo lomjaho, angizisoli ngokulala nami nakho konke ??? ... uma udlulisa iTrust futhi ubanikeze uthando bayinto yokuncoma ..
Ngiyavuma ngokuphelele: uma ubanika uthando, bakunikeza okufanayo ... noma nangaphezulu. Ziyathandeka.
Siyakuhalalisela ngokuba neGarfield 🙂.
Lokhu uGarfield uhlala enza okubi. Akangiboni yini ngaphandle kwendlu ukuthi uyahlanya…? IMG_0832.Inca
Wonke amakati, noma ngabe anjani umbala wezinwele zawo, adla inyama 🙂.
Sawubona, ikati lami lashona ezinsukwini ezimbili ezedlule, futhi laliphuzi ngemivimbo esawolintshi lalihle kakhulu, ekuqaleni angizange ngithande noma yiliphi ikati, empeleni ngangililahla kodwa lafika langenza ngashintsha konke ngokuphelele, lalineminyaka engu-7 kuphela izinyanga ubudala futhi nginezingu-5 zazo nami. Lapho ngifika umndeni wami wangitshela ukuthi ushonile ngenxa yokushaywa, kodwa sonke asazi ukuthi lesi sifo sivelaphi, kodwa kubonakala kungimangaza kakhulu ngoba ubengenalo igazi, kodwa uma elahlekelwe umbala ezindlebeni zakhe, ekhaleni nasemlonyeni, ubemhlophe qwa futhi abafundi bakhe bebevuleke ngokuphelele, ngokushesha ngemuva kokushaywa wangena edidekile futhi wanyakazisa izingalo zakhe kodwa kwathi kungakapheli nemizuzu emingaki washona, angazi ngokuqinisekile ukuthi bamshaye entanyeni yini, noma uma imoto igijima yamwela, yize wayengenasibonakaliso esisitshela ukuthi base behlaselwa. Ngizizwa ngidabukile kakhulu ngokufa kwakhe, ngifisa ukwazi ukuthi kufanelekile yini ukwamukela uhlanga olulodwa, nokuzama ukubhekana nosizi. Ngiyabonga imikhonzo
Ngiyaxolisa ngokulahleka kwekati lakho 🙁.
Mayelana nombuzo wakho, kuya kakhulu ngakunye. Iseluleko sami ukuthi ulinde kancane, kuze kube yilapho usuthole kancane kwi-duel. Ngemuva kwalokho ungajabulela ikati lakho elisha »elisha».
Sawubona, ngikwazi ukondla ikati lami elinamasonto amane.
Emavikini ama-4 angadla kuphela ukudla kwezikati namanzi 🙂.
Nginezinyane lekati elithandekayo kakhulu, igama lakhe nguYuyin, sinaye iminyaka emithathu futhi uyingxenye yomndeni wethu, ingane yami iyamthanda
Kwaphela inyanga ikati eline-tabby lingena endlini yami ngefasitela, labuya nsuku zonke, ngicabanga ukuthi ngelomakhelwane, angazi kahle, manje alisaphumi endlini, lilinda ukuthi ngize ekhaya evela emsebenzini bese ephuma ezongibingelela, He is very lovingth, he purrs at every step, a love !!! Ngibona sengathi ungamukele !! Angazi ukuthi uneminyaka emingaki, kodwa mkhulu, futhi angazi ukuthi ngenzeni…. ukumnika imigomo? Bulala inzalo? Nginokungabaza ngoba mhlawumbe ngelomakhelwane futhi angazi ukuthi uzophatheka kabi yini, yize ikati cishe amasonto amathathu liphumile laya ensimini kuphela, lithatha amathanga ambalwa libuyela endlini yami (ngihlala njalo shiya umlandeli emvulele) okusho ukuthi uhlala enami njalo ... ngaphakathi endlini ngenxa yamakhaza .... noma kunjalo !!! Ngiyajabula ukuthi ngiyayithanda le kitshi elihle, kepha angazi ukuthi kufanele ngithathe siphi isimo ... unganginika izeluleko?
Iseluleko sami ngukubeka up »izingqwembe zekati ezitholakele» ezinesithombe esinoboya, njengoba kungenzeka ukuthi othile usifunayo.
Okwamanje, yinakekele njengoba usuvele uyayenza futhi uma kungathi ezinsukwini eziyi-15 akekho noyedwa oyifakile, khona-ke ngingayincoma ukuthi uyihlanzele.
Sawubona, ngathandana ne-tabby ewolintshi enoboya izinyanga ze-2, bangitshela ukuthi uzoba nezinwele ezinde ezingenza ngijabule kakhulu ukumamukela. Kuyiqiniso yini ukuthi isimo samawolintshi siyinkimbinkimbi ??? Noma kuyinsumansumane? Yikho kuphela okungenza ngibe nokungabaza. Yini ongangitshela yona ngayo? Sanibonani
Umbala awunqumi uhlamvu. Kuyiqiniso ukuthi amakati amnyama ajwayele ukuzola kunamanye, nokuthi amawolintshi athanda ukudlala kakhulu ebusheni bawo, kepha kuncike kakhulu esilwaneni ngasinye futhi, ngaphezu kwakho konke, endaweni akhulela kuyo futhi ahlala kuyo.
Ngingakutshela ukuthi nganginekati eliwolintshi lapho ngisemncane, futhi kwakungumuntu othandekayo: ezolile futhi enothando.
Sawubona Monica, ngibhala ngibonga impendulo yakho mayelana nobumnene balobu boya obuhle. Ngiyakutshela ukuthi ngemuva kokukufunda, ngamukela izinyane lekati futhi alinakuba mnandi ngokwengeziwe, lithandane futhi lihlanganyele, cishe selinezinyanga ezinhlanu ubudala futhi liyisithandwa sendlu.
Ngiyabonga, ukuphawula kwakho kungenze ngathatha isinqumo ngoba ngokungazi ukuthi nginobandlululo oluthile ngamazinyane amazinyane ewolintshi. Sanibonani
Kuhle, ngiyajabula ukuthi ikusebenzele. Siyakuhalalisela ngomncane! 🙂
Ursula Santoyo kusho
Sawubona, nginezinyane lekati eliphuzi elingu-tabby, uyisithandwa sempilo yami, le ndatshana ingisizile ngazi uhlobo lwayo lwenhlanga njengoba ngisemkhankasweni wokumbhalisa njengelungu lomndeni, ngiyabonga kakhulu ngemibhalo yenu
Phendula u-Ursula Santoyo
Ngiyabonga ngokuphawula 🙂. Halala ngelungu elisha lomndeni !!
Sawubona. Ngicabanga ukuthenga i-brindle Persian .. Ngabe ucabanga ukuthi isebenza kakhulu kune-Persian emhlophe yendabuko? Ngingayithanda kakhulu ngoba ingeyendodakazi yami eneminyaka eyishumi. Ngiyabonga
Umbala wekati awuthinti umlingiswa. Yebo kuliqiniso ukuthi amakati we-tabby ajwayele ukusebenza kakhulu, kepha kukhona konke ngempela. Uma ungabaza, ngincoma ukuchitha isikhathi nemidlwane. Ngakho-ke ungakhetha lowo omthanda kakhulu. 🙂
Yize isimilo sakhe singeke sithuthuke ngokugcwele, ungathola umbono wokuthi unjani.
Noma kunjalo, futhi ngaphandle kokufuna ukufika lapho bengangibizi khona, uke wacabanga kahle ngokuba nekati? Ngikubuza ngoba bangaphila iminyaka eyi-15 noma ngaphezulu. Y nikeza ikati ngoKhisimusi akusebenzi ngaso sonke isikhathi.
Sawubona! Ngangihlala nginezinja ezifuywayo, kwaze kwaba ezinyangeni eziyisithupha ezedlule lapho ikati eliwolintshi le-tabby lonyaka owodwa noma ngaphezulu livela endlini yami, futhi lanquma ukungithatha, ngikholwe ukuthi ANGIKE ngihlangane nomunye umuntu onothando, omnandi, ovikelayo kunaye, impela Yinhle !!! Ubumnene, uyazi kakhulu, uyangilandela azungeze indlu, uma ngihlala phansi uhlala eduze kwami, uma ngipheka uyazi konke ukunyakaza kwami, uma ngiphuma ngibuya uyaphuma angihlangabeze futhi angiphulule imilenze yami ngokuhamba kwakhe, KUTHANDA !! Njengoba kungokokuqala ukuthi ngibe nekati, angazi ukuthi abanye bazoba njani, kepha lezi zinhlobo zamazinyane ezimnandi!
Kuhle kanjani… 🙂 Ungenze ngamamatheka hehe Ngokuzimisela, siyakuhalalisela. Ngokwalokho enikubalayo, nobabili nijabule kakhulu, futhi yilokho okubalulekile.
Ngaphambi kokuba ngibe namakati ayisi-5 amnyama namhlophe, nganginalo wayengithanda kakhulu futhi egangile igama lakhe kwakungu-move ngoba wayehlushwa kakhulu yikho konke ababemgijimisa ngakho sazama ukumhlenga kodwa cha ... washona falle kodwa ekugcineni ngathola amakati ami amahlanu 🙂 ngazama ukuthi ngikwazi.
sara jemenz kusho
Sawubona, ungancoma ukuthi ungahambisi ikati noma ulibulale?
Ngine-orenji enhle kakhulu ephucwe izinyanga ezi-3, ukudlala nokudlala
Ngingenza kanjani ukuze bangangilumi kangako ngiyazi ukuthi akakwenzi ngolaka ngoba uyahlanza kufana nokuveza uthando kepha akalinganisi amandla akhe luthando
Phendula ku-sara jiemenz
Iminyaka enconywe kakhulu yokungenisa noma ukukhipha ikati izinyanga eziyi-5-6. Ezinyangeni ezi-3 usemncane kakhulu.
Ukuze ufunde ukungakulumi, kufanele umane ususe isandla sakho isikhathi ngasinye lapho usenza, bese usishiya phansi uma bekusofa noma embhedeni.
Kufanele ubekezele futhi uhlale njalo, kepha ekugcineni uzobona ukuthi uzokufeza kanjani. Mnike isilwane esigxishiwe noma elinye ithoyizi alhlafune hhayi ezandleni zakho.
Ngidinga iseluleko sakho, ikati lami kufanele libe phakathi kweminyaka engu-2-3 ubudala, izingane zami ziseholidini, indodana yami ifike kuqala nekati layo, futhi kuleli sonto elizayo indodakazi yami ifika neyayo, okungukuthi, ngizoba namazinyane amathathu ekhaya, lapho ikati lokuqala lifika ikati lami lathukuthela lagquma futhi lahoxa, ikati lalithukile kakhulu futhi ngosuku lokuqala lathukuthela kakhulu, lagquma futhi lalingazinzile, kufanele ngithi bahlukanisiwe nezindawo, ikati lendodana yami egumbini Ikati lami kwelinye, lapho ikati liphuma ikati livalelwe kwesinye isikhala futhi okuphambene nalokho, sihamba izinsuku ezimbili kanjena, ezinsukwini ezintathu indodakazi yami izofika nekati lalo (kufanele ngiphawule ukuthi amakati amabili (awendodana yami Indodakazi yami) bahlala ndawonye futhi basondelene kakhulu), ngingathanda ukucela izeluleko ukuze ikati lami libe ngumngane wabo! Ekugcineni sekuyisikhala sakhe futhi amazinyane amhlasela, angaphansi konyaka owodwa ubudala! Noma kufanele ngiqhubeke nokuzigcina ezindaweni ezihlukile ezinyangeni ezimbili ezizayo? Ngicela ungisize!! Ngiyabonga! Ngibenza kanjani abangane futhi ngidlale wonke umuntu?
Uma la makati amabili ezwana, iseluleko sami ukuthi ngesonto unawo egumbini elilodwa futhi ikati lakho likhululekile endlini. Ngosuku lwesithathu, beka imibhede yamakati endaweni lapho ikati lingawahogela khona, nombhede wekati egumbini lapho kukhona amakati khona. Ngakusasa, ushintshanisa imibhede futhi. Kwenze futhi kuze kudlule izinsuku eziyisikhombisa.
Kusukela ngesonto lesibili kuqhubeke, khipha amakati ukuze abe ndawonye nekati lakho. Unake kubo.
Uma ubona ukuthi bayakhokhoba, kuyinto ejwayelekile. Kepha uma ubona ukuthi noma ngubani kulaba abathathu uba novalo kakhulu futhi uhlose ukuhlasela (izinwele ezigudlukayo, umsila ogwebayo, amehlo avuleke kakhulu, umlomo uvuleke ukhombisa amazinyo, ukububula), ngeza amakati egumbini bese uzama futhi ngosuku olulandelayo.
Uma ukwazi, zama ukuthola iFeliway, okuwumkhiqizo obasiza ukuba babe nokuzola. Kuthengiswa ezitolo ezifuywayo.
Sawubona, engadini yesikole sami, baphonsa amakati amathathu asanda kuzalwa ebhokisini, imindeni emibili yathatha amakati amabili kwathi eyodwa ngasala ngafuna umhlengikazi ikati elizomnika ubisi, ikati lamamukela futhi lamnika konke uthando lwakhe, manje ngizomletha ekhaya, kodwa ngiyaxolisa ukumsusa kumama wakhe mbumbulu. Uyikati lekati, uyamangalisa futhi uyadlala kakhulu, kepha nginesikhala esincane edepho yami futhi ngihlala esitezi sesithathu, ngesaba ukuthi uzowa, ngingenzani. Ngiyabonga
Uneminyaka engakanani ikati manje? Uma engaphansi kwenyanga eyodwa, kufanele agcine ikati elimtholile, ngoba alukho ubisi olungangena esikhundleni salolo olukhiqizwa amakati.
Uma kwenzeka ukuthi usenenyanga eyodwa noma ngaphezulu, ungaqala ukumnika ukudla okuthambile (ukudla okumanzi kwamazinyane amazinyane), noma ukudla okomile okumanzi ngamanzi.
Ukuyivimba ukuthi ingawi kumele izivalo namawindi kuvalwe. Ukuba mncane kakhulu ngeke kube nzima ngaye ukujwayela ukuba ngaphakathi efulethini. Ungafaka i-wire mesh (grid) emafasiteleni noma kuvulandi uma unayo.
Edgar garcia kusho
Sawubona, nginezinyane lekati eline-tabby engilinikezwe ezinyangeni ezimbili ezedlule futhi engilithanda kakhulu. Ikati cishe linezinyanga ezi-4 noma ezi-5 ubudala. Ekhaya nginekati le-Siamese elingathathi hlangothi elineminyaka engaba ngu-7 ubudala; Ngaso sonke lesi sikhathi lapho ikati belikade lisekhaya, amaSiamese athukuthele kuphela futhi amgqumele futhi axebule amazinyo njalo lapho ikati lifuna ukudlala naye. Noma ikati lifuna ukudlala kanjani, amaSiamese ayenqaba, lihlangana kabi naye. Angazi noma kuyohlale kunje noma ngelinye ilanga ikati laseSiamese liyodlala ngalo noma likubekezelele. Ngifunde ku-Intanethi ukuthi uma kungazwene izinyanga, abasoze bazwana futhi kungangcono ukunika enye ikati. Yini engingayenza?
Phendula u-Edgar García
Ngincoma ukuthi ubekezele. Ikati "lingena ngaphakathi" kukati elikhulile, umuntu ongene endaweni yalo.
Ukubasiza, kunconywa ukuthi usebenzise Okude ekusakazeni, futhi unikeze imiklomelo eminingi kubo bobabili, ngasikhathi sinye. Okuvame ukusebenza kahle kakhulu kungamathini okudla okumanzi.
Okunye ongakwenza ukugcina ikati livalelwe egumbini izinsuku ezintathu. Vala umbhede wakhe ngengubo, wenze okufanayo nangendlu yekati lomuntu omdala. Uma ushintsha izingubo zokulala ngosuku lwesibili nolwesithathu, uzozijwayeza iphunga lomunye, okuzobasiza ukuthi bazwane kangcono.
USonia Castro Lopez kusho
Sawubona, ngisanda kunikwa ikati le-tabby eliwolintshi nelimhlophe, ngicabanga ukuthi alinazo ngisho izinyanga ezimbili ubudala, indoda empofu iyesaba kakhulu futhi ayivumeli ukuthi ibanjwe, iyangifihla futhi iyangithuka, isisebenzisile ebusuku meowing. Noma isiphi iseluleko sokuyiguqula?
Phendula uSonia Castro López
Halala ngelungu lomndeni elisha 🙂
Kujwayelekile ukuthi esabe kakhulu. Ukukusiza kancane ngincoma ukuthi uthenge Okude (nge-diffuser), bese umnika amathini okudla okumanzi kwamazinyane kittens ngezikhathi ezithile. Owokuqala uzokunika ukuzethemba, ngoba kungumkhiqizo owenziwe ngama-pheromones enziwe axegisa amakati; ukudla kuzokwenza uzethembe ngokushesha.
Vele, kubalulekile futhi ukummema ukuthi azodlala, ngokwesibonelo ngentambo. Kancane kancane izothintwa, impela.
Nginamakati amathathu, owesilisa oyedwa nabesifazane ababili. Kutakulwe bonke.
Kungcono ukwamukela noma ukutakula kunokuthenga, ngokungangabazeki. Halala 🙂
Sizokwamukela ikati lezinyanga ezi-2 eli-orange tabby cat. Endlini yami (esitezi sesihlanu) nginamafasitela amakhulu kakhulu. Ngabe amakati ajwayele ukuba ne-parachutist syndrome (efuna ukuphuma ngewindi)? Noma iyiphi indlela yokufundisa amakati ukuthi angabheki? Ngeke ufune ukufaka isikrini kumawindi.
Sanibonani kanye nokuhalalisela iwebhusayithi.
Yebo, amakati angaba ne-skydiver syndrome 🙁. Sine-athikili ekhuluma ngaye, lapha.
Okunconywe kakhulu futhi okusebenzayo ukubeka i-mesh, kuphephe kakhulu kuye.
Sawubona, ngamukele amazinyane amabili amathebulethi izinyanga ezintathu, elinye liwolintshi kakhulu kunelinye, bangabazalwane, kungokokuqala ngqa ukuba namakati futhi ngiyalithanda, bahlanzekile kakhulu basebenzisa amabhokisi abo kadoti, ngicabanga ukuthi umama ufundisile kahle kakhulu. Ziyadlala kakhulu futhi zinothando. Banomhubhe, amabhola kanye nenduku enezimpaphe esihlokweni abasithandayo, nombhede abangawusebenzisi.Bakhetha isihlalo sobukhosi hahaha kodwa ngiyabathanda. Okuthile ongicebisa ukuba ngibenze bazizwe bengcono?
Ngicabanga ukuthi banakho konke okungafunwa yikati: umuntu ojabule ngabo, amathoyizi, imibhede, ...
Banikeze ukudla kwezikati ezimanzi njalo ngezikhathi ezithile. Bazoyithanda 🙂
U-Beatriz Ariza kusho
Nginayo engayithatha endaweni yokukhosela, nganginamasonto ama-2 kuphela ubudala futhi sengivele nginonyaka nezinyanga ezi-4.
Wahle weba inhliziyo yami. Uyadlala futhi unonya. Kuyinkampani enhle kakhulu, lapho engiya khona uyangilandela, angingedwa kepha ukuthi uma ... lapho efuna ukutotosa, uyangifuna, uhlala ezama ukubaleka
Ungivusa nsuku zonke ekuseni kakhulu. Emndenini wami abawathandi amakati futhi kusukela ngaleso sikhathi abangivakashele, ngiyaqonda kodwa nginoTimmy wami?
Phendula u-Beatriz Ariza
UBrenda perez kusho
Sawubona Monica, ngiyakutshela ukuthi angizwani namakati, ubuso bami buvuvukele amehlo ami nokukhwehlela okuningi, ngomzuzwana nje isiguli isiguli sangikhombisa ikati lapho ngiliphakamisa ngabona ukuthi intambo yegolide yaphuma kanjani enhliziyweni yami maqondana nekati (angiqambi amanga, kuyiqiniso) futhi angizange ngivuvuke noma ngidale ukungezwani komzimba, wahlupheka ngoba wayengazange ajwayele leyo ndlu ngoba wesaba kakhulu izinja futhi kwakukhona eyodwa lapho, ngiyamthanda ngenhliziyo yami yonke unezinyanga ezinhlanu ubudala futhi unyaka owodwa edlule isigamu nginaso, ngempelasonto thina ma-asuto sidle isikhwama futhi sacishe safa sihlala njalo emahoreni amabili sibanikeza i-serum futhi sibenza bazi ngayo ngaphezu kwamahora angama-5, ngenhlanhla ngakho konke ukuhlanza amnikeze khona angakuxosha lokho kodwa kusukela kulowo mzuzu walulama futhi akubekezeleleki, iluma kakhulu noma ngabe sinethoyizi phakathi, lingibamba izinwele. Indodana yami iluma umyeni wami futhi ayikwenzanga, ivota izinto phansi, ikhuphuka yonke indawo futhi idle konke ekutholayo, enye iyithethise futhi ingiphendule ngonya lonke (heh, but cute) futhi manje meows, uyalwa nathi , uyasithanda Uyasizonda, kushubile kakhulu, angazi ukuthi yini enye okufanele ngiyenze ... ngaphambi kokuba abe sendlini, manje kuzofanele simshiye egcekeni elibiyelwe kuleyo ndawo, futhi ngendlela Nginwaya amathoyizi, amabhola, amagundane, umata, uyangithanda nokuthi ngimsonge ngeThatha ingubo ngiklwebhe amadevu akhe nobuso ngesixubho samazinyo, kodwa ukhathele kakhulu, angazi ukuthi yini enye okufanele ngiyenze .. ukulunywa kuyangidabukisa, lokho kusizwisa ubuhlungu kakhulu ...
Phendula uBrenda Perez
Into yokuqala engingayincoma ukuthi awunayo kuleyo ndawo. Lokhu kuzokukwethusa kakhulu njengoba phambilini ubujwayele ukuba sekhaya.
Ngiyakuqonda ukuthi awufuni ukuthi akulume, kodwa ukumfundisa ukuthi kufanele wenze ezinye izinto. Isibonelo, noma nini lapho uhlose ukuluma, vele usuke kuye, umshiye yedwa. Lapho ezolile, mnike ikati noma ithoyizi.
Futhi, ungadlali cishe ngayo. Ngisho, akuyona inja. Izikhathi eziningi lapho sidlala nezinja sizenza zigcwale, sizinike ithoyizi bese sizidonsa, ... kahle, senza uchungechunge lwezinto okuthi, uma senza ngamakati, zingazizwa zisongelwa, ngakho-ke, zihlasele. Futhi akumele aphoqwe ukuba enze noma yini.
Ngaphezu kwakho konke, kufanele ubekezele kakhulu. Izinkinga zokuziphatha zingathatha amasonto noma izinyanga ukulungisa. Kepha ngenhlonipho nothando, konke kungenzeka 🙂.
Sawubona! Uma uthi akufanele ubanikeze okusanhlamvu, ngabe usho ukudla okulinganiselayo?
Cha, ngisho zonke izinhlobo zokudla. Amakati awakwazi ukugaya okusanhlamvu kahle, futhi lesi sithako sivame ukudala izinkinga zempilo, ezifana ne-allergies noma i-cystitis.
Sawubona, esikhashaneni esedlule ngigcine amakati amabili anjalo avela ezitaladini, abengekho ndawonye endaweni eyodwa, eyodwa yavela kuqala kwathi eminye imizuzu kamuva yasondela kakhulu, manje ngifuna ukubuza ukuthi iyafana ngokomzimba, kunzima ukuhlukanisa kubo, nazo zibukeka ngokufana ezenzakalweni zomzimba, kungahle kube namakati wejimaguas noma okufana nalokho
Amakati amawele? Angikaze ngiyizwe, empeleni. Kepha yebo, kungenzeka.
Nginekati elinezici lezi, esalithatha ukuthi silithathe lapho esenezinyanga ezine ubudala, esisijabulelayo. Muhle, unothando, uyadlala, uyalalela futhi akayeki ukugeqa amagula lapho simqoma. Yena, onezinyanga eziyi-4 ubudala, nekati lethu elijwayelekile, elineminyaka engu-7 ubudala, bahlala ndawonye. Ngokuvamile bazwana kahle. Okuwukuphela "kodwa" ukuthi ayimbozi indle ngesihlabathi, futhi i-ñorda yendoda elahliwe inuka kabi ... Ngabe kukhona isixazululo noma ilinde ukuthi ivuthwe kakhulu? Ngiyabonga kusengaphambili.
Ukungazimbozi indle yabo ngokwemvelo kuyinto ejwayelekile, nokuthi banuka kabi futhi. Kepha ... unikeza hlobo luni lokuphakelayo?
Ngikubuza ngoba ngikuqinisekisile ukuthi uma umnika okungenawo okusanhlamvu (Uhlobo lwama-Applaw, Ukunambitha kwasendle, I-Orijen, njll.) Lelo phunga aliqinile kangako. Kuliqiniso ukuthi ngokuqukatha inyama kuphela, inani liyabiza, kepha lisakazeka kakhulu ngoba linomsoco ngokwengeziwe, futhi ngobuningi obuncane selivele selanelisiwe.
Izinhlamvu (irayisi, i-oats, ummbila, njll.) Azidingi amakati, futhi zingadala izinkinga ezinkulu zempilo, njenge cystitis, ukungakwazi ukugaya.
Ngiyabonga Monica. Sizokunambitha ukudla okuphakamisayo.
Ngifisa sengathi ngabe ngine-tabby ewolintshi, ngizoqinisekisa umama wami ukuthi anginikeze eyodwa
Izintshisekelo zekati lase-Andes
Ungayisabisa kanjani ikati elahlekile